THAZINRANANT: 7/3/11 - 7/10/11
ဒီနေ့ ဂျူလိုင်လ ၉-ရက်နေ့၂၀၁၁-ခုနှစ်မှာ တောက်ပိုင်းဆူဒန်လွပ်လေးရခဲ့ပါပြီ။ဒေသစံတော်ချိန်
(2100 GMT) မှာစတင်ပြီး ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံးနိုင်ငံလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်
ပေါင်းများစွာ မြောက်ပိုင်းဆူဒန်နှင့်ပြသနာတက်ခဲ့ရပြီး လူဦးရေ ၁.၅ သန်းခန့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လွပ်
လပ်ရေးတိုက်ပွဲကနေအခုတော့ တောင်ပိုင်းဆူဒန်ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတ Salva Kiir ကအခြေခံဥပဒေကို
ဆူဒန်သမ္မတ Omar al-Bashir၊ကုလသမဂ္ဂ Banki Moon တို့က အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ
နှင့်အတူ ဒီသမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်ကိုအတူတကွစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ၁၉၃နိုင်ငံ
မြောက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဆူဒန်ဟာအာဖရိကရဲ့ ၅၄နိုင်ငံမြောက်ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်း
အရွယ်အစား။၆၁၉၇၄၅ ကီလိုမီတာ(၂၃၉၂၈၅ စတုရန်းမိုင်) စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီနှစ် နိုင်ငံပေါင်းအရွယ်
Posted by သဇင်ရနံ့at 15:41 No comments:
အသက် ၁၁-နှစ်သာရှိသေးတဲ့ခလေးတယောက်ကို ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာ သံလိုက်လူသားလို့ခေါ်နေ
Rio Grande do Norte ပြည်နယ်က Paulo David Amorin ဆိုတဲ့ကလေားငယ်ဟာ ဇွန်းတွေ ကတ်
ကြေးတွေတင်မက casserole အိုးတွေကိုတောင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကပ်ငြိလျှက်သယ်ဆောင်နိုင်
တယ်လို့ TV Globo ရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။
သူ့ဖခင် Junior Amorin ကသူ့သားကို သားလှီးဓားနှင့် ခက်ရင်းကိုသယ်နိုင်မလားမေးကြည့်တော့ဒီ့
ထက်မကအများကြီးသူ့သားရဲ့ခန္ဓာမှာ သံထည်ပစ္စည်းတွေ ကပ်ငြိနိုင်တာကိုအံ့သြဖွယ်တွေ့ရတယ်လို့
အခုအခါ ပိုလိုဒေးဗစ်ကို သူ့အတန်းဖေါ်သူငယ်ချင်းတွေက သံလိုက်လူသားလို့ခေါ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါ
ကျောင်းမှာ လူတိုင်းက ကျနော့ကို သံထည်ပစ္စည်းတွေ ကပ်ကြည့်လို့ရမလားလို့မေးကြတယ်။သူတို့က
ကျနော့ကို တကယ်မဟုတ်ပဲ ကျနော်လှည့်ဖြားနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်လေ။
ဒေါက်တာ Dix-Sept Rosado Sobrinho က သူ့ရဲ့ဆရာဝန်သက်တမ်း နှစ် ၃၀ အတွင်းမှာခုလိုအတွေ့
မူရင်းသတင်းကိုအောက်က လင့်ခ် မာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 09:18 No comments:
ဖြစ်။ကြည့် မဲ့ ကြည်ြ့ဖစ်တော့လည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ယူကျူးစာမျက်နှာတွင်ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ
အထောက် အထားများကိုရှာဖွေရင်းသွားတွေ့ လိုက်ရသည်အယင်ကလည်း ကြားဖူးနေတာကြာပြီဖြစ်
ပြဇတ်ကိုကြည့်ချင်သည်ဆိုသည်ထက်ရှေ့ ရခိုင်တို့ ၏ရခိုင်ထီးနန်းအ ငွေ့ အသက်များကို ခံစားလိုစိတ်
တာ၏ ဖန်တီးမှုတို့ကိုဝေဖန်စရာမရှိပါ။ အလွန်ကြည့်ကောင်းသည်ဟုသာပြောရမည်ထင်ပါသည်။သ
ရုပ်ဆောင်ဘုန်းလျှံ၊စန်းနီလာဝင်းတို့ နှင့် ရခိုင်သရုပ်ဆောင်များ၏နုပညာရသများကိုဇတ်လမ်းဇတ်
ပြဇတ်ကိုစဖွင့်သည့်မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့် ကျနော်ကြက်သီးများတဖြန်း ဖြန်းထမိသည်။ရခိုင်
မတ် သေနာပတိအစုံ ဖြင့်ညီလာခံကိုကျင်းပနေသည်။ဘေးတဘက်တချက်တွင်အစေခံများကရွှေ ငွေ
ကြီး၏ရာဇပလ္လင်ရှေ့ လက်ဝဲလက်ယာစုံညီစွာခစားနေကြ ၏။ အခြားစစ်သူကြီးများ၊မြို့ စားနယ်စားများ
ကလည်းအသီးသီးသူ့ နေရာနှင့်သူ ခေါင်းငုံ့ ခစားနေကြသည့်မြင်ကွင်းမှာတကယ့်ရခိုင့်ဘုရင့်နေပြည်
တော်နန်းတော် ထဲတွင် ကျင်းပနေကြသလားထင်မှတ်မှားလောက်သည်။
ခံသည်ရခိုင်လူမျိုးတို့ ၏နန်းတွင်းညီလာခံသဘင်၊ဤစစ်သူ ကြီးတို့ကရခိုင့်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုအ
သက်ပေးကာကွယ်ပေးကြမည့်စစ်သူကြီးများ၊ဤမှုးကြီးမတ်ရာများတို့ကရခိုင်ပြည်ကြီးစည်ပင်ဝပြော
သာယာစေဖို့ အကောင်းဆုံးအကြံအဥာဏ်တို့ ဖြင့် ဘုရင်မင်းတရားကြီးကိုလျှေက်တင်ကြမည့်ပညာရှိ
အမတ်ကြီးများ၊ဤအခြင်းအရာတို့သည်ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များမဟုတ်ခဲ့ကြ၊ရခိုင်လူမျိုး တို့ သမိုင်းတွင်အမှန်
မင်းသမီးစောမြနန္ဒာနှင့်စစ်သူကြီးတို့ ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုက်ပြီးနောက် တစ်ဦး၏အချစ်တစ်ဦး၏
ချစ်သမီးချေကိုရခိုင်စစ်လို့ အမိချစ်တယ်၊ချစ်သားချေကိုရခိုင်စစ်လို့ အဖချစ်တယ်။
မျိုးတို့ မိမိတို့ ၏ ရခိုင်မျိုးဆက်များတိုင်းတပါးသားတို့ နှင့်သွေးမရောပဲ ရခိုင်မိဘနှစ်ပါးစစ်စစ်မှမွေးဖွား
လာမှုကိုတန် ဖိုးထားသည့်ရခိုင်အားမာန်သီချင်းသံဟုယုံကြည်မိပါသည်။ နောက်ထပ်ညီလာခံတစ်ခု
တွင်တိုင်းပြည်၏တစ်နေရာတွင်ရန်သူများ၊ မသူတော်များထကြွသောင်းကျန်းနေသည်ကိုဘုရင် ကြီး
သိရတော်မူသောအခါဘုရင်ကြီးကရန်သူများကိုသွားရောက်နှိမ်နင်းဖို့ အားထားရ သည့်စစ်သူကြီးများ
ကိုစေလွှတ်လိုက်သည်။စစ်သူကြီးတို့ကလည်းအဖရခိုင်ပြည် ကိုကာကွယ်ဖို့ ၊ရခိုင်ပြည်သူပြည်သား
များ ကိုကာကွယ်ဖို့ ဆိုလျှင်ရဲစိတ်ရဲမာန်များပွားလျှက်ဘာမထီဇာနည်ဖွားတို့အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိ
ဤမင်းသမီးစောမြနန္ဒာပြဇတ်ကိုကြည့်ရင်း ကျနော့အတွေးတွေက ရင်ထဲ မှာယောက်ယက်ခတ်လာ
ခဲ့ကြသည်။ရှေ့ ရခိုင်ဘိုးဘေးတို့ ကားမိမိတို့ ပြည်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ကိုယ့်တိုင်းကိုယ့်
ဤသို့ဆိုလျှင်ဤလူမျိုးတို့ အခုဘယ်မှာလဲ။သူတို့ အခုကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွင်ဘယ်အခန်း
ကဏ္ဍတွင်ရပ်တည်နေကြသလဲ။ ထိုမျိုးဆက်ကျ နော်တို့ က ဘာတွေကိုများလုပ်ပေး နိုင်ကြပြီလဲ။ဘာ
တွေကိုကျနော်တို့ လုပ်နေ ကြသလဲ။ကျနော်တို့ ရဲ့ နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ဘာတွေ ကိုများ
ဤမေးခွန်းများကိုကျနော်ကိုယ့်ကိုကိုမေးကြည့်မိပါသည်။ မေးရင်းဖြင့်ကျနော့ရင်ထဲတွင်တလှပ်လှပ်ဝမ်းနည်းလာပါသည်။ ဤမေးခွန်းများသည်ကျနော့နှလုံး
သားကိုအပ်ချွန်ဖြင့်တစွပ်စွပ်ထိုးသကဲ့သို့နာကျင်လှပါသည်။ပြဇတ်ကိုကြည့် နေသောကျနော့မျက်
လုံးများကွန်ပျူတာဖန်သားကိုမမြင်ရတော့။မျက်လုံးများက မျက်ရည်တို့ ဖြင့်ပြည့်လျှံခဲ့ပြီ။
ဒီနေ့ ရခိုင်လူမျိုးတို့ ဒီမေးခွန်းတွေအတွက်အဖြေရှိကြရဲ့ လား။ရှိယင် ကျနော့ကိုဖြေပေးကြပါ။ကျနော်
တသက်တာကျေးဇူးရှင်တစ်ယောက်၏စာရင်းတွင်ထည့်ပြီး ကျနော်သူ့ ကိုကျေးဇူးဆပ်ပါမည်။ထို့
တကယ်တော့ကျနော်တို့ ကိုယ် ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်ကြဖို့ လိုပါသည်။ကျနော်တို့ တွေ နောင်မျိုးဆက်
ရန်လိုမှု တွေချဉ်းပဲဖြစ်နေကြပါသေးတယ်။ဒါကိုအထူးသတိထားဖို့ ဆင်ခြင်ဖို့ လိုပါတယ်။တစ်ယောက်
ကိုတစ်ယောက်အပြစ်တင်နေရုံနင့်ကျနော်တို့ လက်ထဲကိုကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ပြန်ရောက်မှာတဲ့လား။
တစ်ဦးကိုတစ်ဦးရန်လိုနေကြရုံနှင့်ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်မှာ တဲ့လား။ဆင်ခြင်ကြဖို့ ကောင်း
ပြည်မဆိုခံကြရစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ ကျနော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးများမှာကြမ်းတမ်းသောလောကဓံကိုခံစား
နေကြရပါတယ်။ဘ၀၏အခက်အခဲအကျပ်အတည်းမှန်သမျှကို ကျနော်တို့ အတူလက်တွဲခုခံကြရပါ
ကောင်းမဟုတ်ပဲစနစ်တကျစည်း စည်းလုံးလုံးတည်ဆောက်ကြဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုတ၀ဂူကနေစီး
Posted by သဇင်ရနံ့at 19:22 No comments:
head over heels ဆိုတာက suddenly and deeply in love လို့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပါတယ်။မြင်မြင်
Almost as soon as he met her,he fell head over hells for her.
သူမကို တွေ့တွေ့ချင်းပဲ သူဟာ သူမပေါ်မှာအရမ်းကိုချစ်မိသွားတယ်။
break someone's heart ကတော့ make someone very sad ဖြစ်ပါတယ်။အသည်းကွဲတယ်၊ချစ်သူ
They had six wonderful months together,and then she left.
pick up the pieces ဆိုတာက rebuild something that was damaged အသည်းကွဲပြီးတဲ့နောက်
It broke his heart,andayear later he's only beginning to pick up the pieces.
သူ့အသည်းတွေကွဲပြီးလို့ တနှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်လည်
Posted by သဇင်ရနံ့at 16:32 No comments:
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ အောင်မြင်ကြီးပွားကြောင်း သြ၀ါဒရတနာများ-၄
ပစ္စည်းဆိုတာလည်း ခန္ဓာက တာဝန်ပေးထားတာဆိုတော့ နေ့တိုင်းရှာဖွေစုဆောင်းပြီး အပေါင်းလက္ခ
ဏာ ပြုပေးတဲ့အခါ ရရင် ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ရှာရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သဒ္ဓါအား၊ပညာအား ကိုယ်ပိုင်လူစွမ်းလူစကို သုံးပြီးအစည်းကမ်းဘောင်အတွင်းက တရားနည်းလမ်းနဲ့
အညီ ရှာရမှာ ကိုပြောတာပါ။
၀ိပသနာ ဥာဏ် ထက်သန်နေသူရဲ့ သန္တာန်မှာ ငါအစွဲ၊ငါ့ဥစ္စာ အစွဲတွေ လွတ်မြောက်နေတာနဲ့အမျှစိတ်
ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာခြင်း၊စိတ်နေစိတ်ထား ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခြင်း၊ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်း
မွန်ခြင်း၊ဘ၀ကိစ္စအထွေထွေ အဆင်ပြေခြင်း စတဲ့ မရေတွက် နိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတရားတွေလဲ အံ့သြ
မသေချာတာကိုရချင်ရင် သေရမှာကို အရင်ဆင်ခြင်ရတယ်။ ဘ၀အောင်မြင်ရေးထက် ဘ၀တန်ဖိုးရှိ
ရေးက ပိုပြီးအေ၇းကြီးတယ်။အနေကောင်းမှ အသေကောင်းမယ်။
၀ိပသနာ အားထုတ်တယ်ဆိုတာ“ငါဘာလဲ” လို့သိအောင် လုပ်တာပါပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို သုတေသနပြု
မျက်ရည်နှစ်မျိုးရှိတယ်။တရားကို ချစ်ခင်နှစ်သက်ပြီး ကျတဲ့ မျက်ရည်နဲ့ မိဘဆွေမျိုး စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့
တရားကြောင့်ကျတဲ့မျက်ရည်ဟာ အေးချမ်းတယ်၊ မညစ်နွမ်းပဲဖြူစင်ဆုံးပဲ။ကိလေသာတည်းဟူသော
တဘ၀မဟုတ် တဘ၀မှာတော့ မိဘနဲ့သားသမီး၊ဆရာနဲ့တပည့်တော်ခဲ့ကြမှာပါ။
သံသရာမှာ မတော်စပ်ဘူးတဲ့သူ မရှိပါဘူးလို့ ဘု၇ားဟောထားတာရှိတယ်။
အဲဒီသဘောလေးကို ပြန်ဆင်ခြင်မိတဲ့အခါ တွေ့သမျှလူတိုင်း ကျေးဇူးဆပ်ချင်တဲ့သဘောဖြစ်လာနိုင်
သတ္တ၀ါတို့သည် ကမ္မ၀ိပါကအလျှောက် ကျင်လည်နေကြသူများသာဖြစ်ရာ ယင်းဓာတ်ဖွင့်ပေးသောအ
လုပ်သည် ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန် တို့တွင်လည်းမလာ၊ဘာသာတ၇ားနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်သည်ဟူ၍သာ မှတ်သား
ရုပ်ပစ္စည်းတွေတိုးလာလေ၊ပျော်စရာတွေခမ်းခြောက်သွားလေ၊တဖက်က ၇ုပ်ဝတ္ထုတွေ တက်လာလေ
တဖက်က ပျော်စရာ အေးချမ်းစရာတွေ ခမ်းခြောက်သွားလေ၊ တဖက်ကရုပ်ဝတ္ထုတွေတိုးလာလေ တ
ယောက်နဲ့တယောက် ယုံကြည်စိတ်ချမငတွေက ခမ်းခြောက် ပျောက်ကွယ်သွားလေ။
“ကိုယ်ကသူတပါးကိုသည်းခံရတယ်” ဆိုတာသာရှိရမယ်။“သူတပါးက ကိုယ့်ကိုသည်းခံရတယ်”ဆိုတာ
အကျိုးရှိ-မရှိ၊သင့်မသင့် ဆင်ခြင်ပြီးမှ ကိုယ်မှုနှုတ်မှုပြုပါ။
(ပဏ္ဍိတာ၇ာမ ရွှေတောင်ကုန်း သာသနာ့ရိပ်သာ ဆ၇ာတော်)
ချမ်းသာသုခဟာ ကိုယ်ချမ်းသာမှု၊စိတ်ချမ်းသာမှုနှစ်မျိုးအနက် ကိုယ်ချမ်းသာမှုထက် စိတ်ချမ်းသာမှု
စိတ်ချမ်းသာမှုမှာလည်း လောဘနှင့်ပျော်၍ ချမ်းသာမှုဟာ နောက်ကပ်လျှက်သော်လည်းကောင်း၊အ
ပျော်၍ ချမ်းသာမှုဟာ တကယ့်ချမ်းမဟုတ်ပဲ ဆင်းရဲဖို့အကြောင်း ဒုက္ခအပေါင်းသာဖြစ်တယ်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 16:17 No comments:
Posted by သဇင်ရနံ့at 00:01 No comments:
See red ဆိုတာက suddenly feel extreme anger ကိုဆိုလိုတာပါ။ရုတ်တရက်ထပြီးပေါက်ကွဲတာ
what got into himကတော့ why he became so extreme ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုရုတ်တရက်
lost itဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို lost control ဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုယ် မထိမ်းချုပ်လိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေ
အောက်က အင်္ဂလိပ်ဝါကျကို ကြည့်လိုက်ယင်ပိုပြီးရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
As roads become busier,road rage is becoming more common, Ben Smith,43,from
London,was trying to park his car yesterday when another driver got in first. Smith saw red,jumped out,shouted at the other driver and started kicking the man's car, doing 800
pound worth of damage.Smith told police later,' don't know what got into me. I've never
done anything like that before.I just lost it.'
အင်္ဂလိပ်စာ ဗဟုသုတ တိုးတက်ကြပါစေ။
Posted by သဇင်ရနံ့at 17:16 No comments:
လူမျိုးတိုင်းကသူ့ ထက်ငါအယင်ဟြိကိုရောက်ဖို့ ကြိုးစားနိမ်ကတ်တေ။ ကမ္ဘာ့စူပါ ပါဝါ အမေရိကန်က
စစ်အီးကာလနောက်ပိုင်း စူပါ ပါဝါအဖြစ်ကနိမ် သူ့ နိမ်ရာကိုအစားဝင်ရောက်လာဖို့ (သို့ )မျှဝေရဖို့ ဖြစ်
လာရေ။တရုတ်၊အိန္ဒိယ စသည်ဖြင့်။ ဂျပန်ကလည်းနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာသူရို့ တိသြဇာတက်ဖို့ ပို
လို့ ကြိုးစားလာရေ။သမ္မတဘုရ်ှလက်ထက်မာ ဂျပန်၏ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြုပြင်လို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်း
မာ ဒေထက်ပါဝင်လာဖို့ ထောက်ခံတိုက်တွန်းခဖူးစောဝ်ကိုမှတ်မိလိုက်တေ။
အိန္ဒိယလည်း လုံခြုံရေးကောင်စီ၏အမြဲတမ်းအဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်ကိုရောက်ဖို့ တာစူနိမ်ရေ။
ကျနော် ပြောချင်စောဝ်က ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ဇာပိုင်လုပ်နိမ်ကတ်တေလဲဆိုစောဝ် ပါ။နှစ်ဆယ်တစ်ရာစုမာကိုယ့်တိုင်းပြည် အတွက် အားကစားကဏ္ဍမာပင်ဖြစ်ဖြစ်၊နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမာပင်
ဖစ်ဖြစ်၊နည်းပညာကဏ္ဍမာပင်ဖြစ်ဖြစ် ကဏ္ဍတိုင်းမာ သူ့ ထက်ငါအချိန်တိုင်းမာ….
အချိန်တစက္ကန့် တောင်ဖြုန်းဖို့ ကိုမပြောကေ့ ။လောက်တောင်မလောက်။
ယေ့အချိန်မာ ရခိုင်လူမျိုးတိဇာတိလုပ်နိမ်ကတ်ပါလဲ။ သူ့ ရို့ ၏လက်ဟိအခြေအနေတိကဇာပိုင်လဲ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇတ်ခုံမာ ဇာအခန်းကဏ္ဍမာ ထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိမ်ကတ်တေလဲ။
ကျနော်ပြောချင်စောဝ်က လူတစ်ယောက်ချင်းစီး၏ ပါဝင်မှုမဟုတ်ပါ။လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနင့်ပါဝင်နိုင်
စိတ်မကောင်းပါ၊ဒေနိုင်ငံဒေလူမျိုးတစ်ခါလဲမကြားဘူးလို့ ပါလို့ သူကပြန်မိန်းပါရေ။
ယေကေ ကျနော်ကဆက်လို့ …
ကျနော် ကမ္ဘာ့မြေပုံကို ဖြန့် ချ၊
မြန်မာပြည်မြေပုံထဲက အနောက်ဘက်ခြမ်းကို ကျနော်လက်ညှိုးထိုးပြ။ယေခါ….
ဒေစောဝ် မြန်မာပြည်မဟုတ်လားလို့ ပြန်မိန်းရေ။
ဟုတ်ပါရေ၊လောလောဆယ်တော့မြန်မာပြည်ထဲမာပါ။ယေကေလဲ အယင်ကတော့မဟုတ်ပါလို့အစ
ယေမ အားနာ ပါးနာနင့် ခေါင်းညိတ်တေ။ယေ့စောဝ်တောင်သူ့ မျက်လုံးက ခွဲထွက်ရေးဝါဒီသမားလား၊
ယေနင့်ဖြစ်လို့ လဲ လောကမာ လွတ်လပ်မှုလောက်တန်ဖို့ ဟိစောဝ် ဒေကမ္ဘာတစ်ခုလဲမဟိလို့ ဗီယက်
နမ်ခေါင်းဆောင် ဟိုချီမင်း ကပြောခစောဝ်ကို။
လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးကေ အရာရာ ဆုံးရှုံးလားယာလို အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တိကပြောခစောဝ်ကို။
လည်နိုင်ရေ သိမ်ငယ်ခြင်းတိ ရင်ထဲမာအပြည့်။
နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာနှစ်ဆယ့်ငါး နှစ်တောင် ကိုယ့်အရှင်ကိုယ့်သခင်နင့်ဝီးနိမ်ရေလူမျိုးတစ်မျိုး။မျိုးဆက်သုံး
ဆက်နည်းပါးလောက် အမိမဲ့သား ရီမဲ့ငါးတိဘ၀က ရင်ထဲမာ ကြေနပ်ခြင်း၊အလိုကျခြင်းရို့ တိဇာပိုင်
ယပိုင်အနိမ်အထားမျိုးမာ ကျနော်ရို့ အချင်းချင်း…
မနာလို မိစ္ဆိယစိတ် တိ ထားနိမ်ကတ်ဖို့ သိမ်းလား။
တစ်ယောက်အမှားကို တစ်ယောက် ဆီအပေါက်ဟြှာပိုင် ဟြှာလို့ ထိုင်လို့ အပြစ်တင်နိမ်ကတ်ဖို့ သိမ်း
အချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းဖေးကူလို့ တူရာကို အားစိုက်လို့ အလုပ်လုပ်ကတ်ဖို့ လား။
လက်တွဲလို့အမျိုးသားရေးကို လုပ်ကတ်ဖို့ လား။
ကျနော်ရို့ ဒေနိကိုယ့် ကို ကိုအထပ်ထပ်မိန်းကတ်ရဖို့ မိန်းခွန်းတိပါ။
အပြစ်ကင်းရေ ရိုသားစွာမှားယွင်းခြင်းလားဆိုစောဝ်ကို ဖြစ်လာရေပြသနာကိုအခြေခံလို့ ကာယကံရှင်
တိနင့်ကိုယ်တိုင်သဘောထားကြီးမှုတိကို အလျှံပယ်သုံးပြီးကေ စကားပြောဖို့ ဆိုကေ ကျနော်ရို့ ဇာဖြစ်
လို့ နားလည်မှုမရနိုင်လဲ။ညီညွတ်မှုတစ်ခုကိုဇာဖြစ်လို့ မတည်ဆောက်နိုင်လဲ။
ကျနော်ရို့ တိအားလုံးစောဝ် အဖရခိုင်ပြည်ကိုချစ်ကတ်လေလူဂျေးပါ။ကျနော်မာယေ့ယုံကြည်မှုတစ်ခု
ယေကေလဲ ကျနော်ရို့ ကြားထဲမာ ကွာဟချက်က……
တစ်ယောက်နင့်တစ်ယောက်သဘောထားကွဲလို့လူနှစ်ယောက်မာ ဦးတစ်ယောက် ပဲ့တစ်ယောက်
ခရီးက ရောက်ဖို့ ကိုမပြောကေ့။နောက်ဆုံးလောင်းတောင်ခါးပိုင်းက ပြတ်လားနိုင်ပါရေ။
ယေကေ ကျနော်ရို့ တခရီးတည်းလားလူတိအချင်းချင်း။
တက်မ ကိုင်ကျွမ်းကျင်လူက တက်မကိုကိုင်။
ရာသီဥတု ကျွမ်းကျင်ရေလူက သဘာဝ ဘေးဆိုးတိရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ကြည့်လူတိက ကြည့်။့လီ
တိုက်မှုအလားအလာကိုကြည့်လို့ ရွက်ထောင်သင့်လူက ရွက်ကိုကိုင်။
အသိပညာဗဟုသုတ ဟိရေလူတိကို မိန်းစရာဟိကေ မိန်းလို့ သူရို့ ၏အကြံအဥာဏ်ပီးမှုတိနင့်အတူ
ကျနော်ရို့ လိုရာခရီးကိုရောက်ဖို့ခရီးအတူနှင်ကတ်မေဆိုကေ….
ပန်းတိုင်ကို ကယောင်းပင်မရောက်ပဲ နိမ်ဖို့ လား။
ကျနော်ရို့ ဇာကိုစောင့်နိမ်ကတ်ဖို့ လိုသိမ်းလဲ။
ဒေနိ။ဒေအချိန်။ဒေစက္ကန့် မ အဖရခိုင်ပြည်အတွက် အလုပ်စလုပ်ကတ်မေ။
အသူ တက်မကိုကိုင်ဖို့ လဲ။
အသူ ရွက်ကိုကိုင်ဖို့ လဲ။
ရီပက်တေလူ လဲမဟိလို့ မဖြစ်။ခရီးနှင်နိမ်ရေလောင်းတစ်စင်းမာသူလဲအရေးကြီးရေ။
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာရေခေတ်စနစ်နင့်အညီ ကျနော်ရို့ လက်နင့်ဂျေးခတ်နိမ်လို့ လဲမပြီး။ခေတ်မီ
စက်ကရိယာတိ တတ်ဖို့ လိုကေလဲ တတ်နိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကတ်ရဖို့ ။
တက်မ ကျွမ်းကျင်လူတိ ထွက်လာလတ်ကတ်ပါ။
ကျနော်ရို့ ခရီး ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ မ၀ီးပါယာ။
ဒေခရီး မ၀ီးပါယာ။နှစ်ပေါင်း ၂၂၆ နှစ်တောင် နှင်နိမ်ကတ်တေခရီးမဟုတ်ပါလား။
Posted by သဇင်ရနံ့at 16:56 No comments:
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ အောင်မြင်ကြီးပွားကြောင်း သြ၀ါဒရတနာများ-၃
အိုး...မနုသလူအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့၊ဘာမှ အမြဲမရှိသောလောက ဖြစ်ပြီးလျှင် ပျက်လေ့ရှိသော
စိတ်ထား ဖို့လိုခြင်း ရှိပါမည်နည်း။
လိုဖြစ်နေသလား။ မျှစ်စို့လေးလို့ ဖြစ်နေသလား။ကြခတ်ဝါးရုံကြီးလို ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခတောက
လွတ်မြောက်အောင် ရုန်းကန်ဖို့ ခက်ပြီ။
ကြာရှည်၊ပြုမိ သည်မှာ မှားခဲ့စွာ” ဟု ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြု ပြစ်သောင်ထု၏။
”ပုထုဇ္ဖနော ဥမ္မတ္တကော” ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ပုထုဇဉ် မှန်သမျှ အရူးချည်းပါပဲ၊ဒါတွေကို ဂရုထားကြည့်
ရင် ထိုအရူးထခြင်းမှာလည်း ကိလေသာ အနာ၏ ဖေါက်ပြန်မှု ပဲ မဟုတ်ပါလား။
မည်သည့်အာရုံငါးပါးနဲ့တွေ့တွေ့ မိမိနှလုံးသားထဲ သူတပါး အငှားစိတ် မ၀င်လာစေနဲ့။ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကို
သာ ခိုင်မာ ပြတ်သားစွာ ထားပြီး ကြိုးစားပါ။
အဲဒီစွမ်းအားဟာ အံ့ဖွယ်တပါး ပဲ။
တရက်နှစ်ရက်စာ အလုပ်အကိုင်ကလေး ရလာတာနဲ့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအရာရာကို လုပ်ကိုင်
နိုင်ရင်၊စားဖို့သောက်ဖို့ကလေး၇တာနဲ့ သီချင်းဆိုပြီး အရာရာ လုပ်နိုင်ရင်၊အခုသံသရာ တလျှောက်လုံး
တွေ့ကြုံသွားရမယ့် ဆင်းရဲဒုက္ခ ငြိမ်းအောင်လို့ တရားအားထုတ်ရတာ ပိုပြီး ၀မ်းသာစရာ မကောင်းဘူး
သီချင်း ဆိုရုံတင်မကပါဘူး၊ဆိုင်းပါတီးပြီးတောင် တရားအားထုတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကို မကောင်းအောင်လုပ်တာ ဘယ်သူလဲ။မိမိပါပဲ။မိမိကိုယ်ကို အန္တရာယ်တွေ့အောင်လုပ်တာ
မိမိကိုယ်ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာ ဘယ်သူလဲ။မိမိပါပဲ။ဒါကို“ကမ္မသကောမဟီ ကမ္မဒါယောဒေါ”
ကိုခန္ဒာ ကျန်းမာဖို့ ကိုယ်ခံအင်အားလိုတယ်။စိတ်မှာလည်း သန့်ရျင်းချမ်းသာဖို့ အင်အားလိုတယ်။အ
လိုလိုတော့ပြည့်မလာနိုင်ပါဘူး။မွေးယူမှရတယ်။ သတိပဌာန်ဟာထိရောက်အောင် ဖြစ်ပွားစေရင်စိတ်
“မေတ္တာဆိုတာ အကျိုးကို လိုလားခြင်း”
အဲဒီတော့ အကျိုးကို လိုလားခြင်းဆိုတာဟာ အသိဥာဏ်က ဖြစ်နိုင်တာနော်၊ဘယ်ဟာကောင်းတယ်၊
ဘယ်ဟာ မကောင်းဘူး ဆိုတာ မသိဘဲနဲ့ အကျိုးကို လိုလားတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
“အချိ်န်တန်ဘိုး လူတန်ခိုး” ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်တရားနဲ့ ကိုယ့်စွမ်းအားကို ဖော်ထုတ်ပေးတာပါပဲ။
ကိုယ့်မှာ စွမ်းအားရှိသလောက် ကိုယ်ပိုင်တရားရှိလာမယ်။
ကိုယ့်စွမ်းအားကို ကိုယ့်နှလုံးသားထဲ ရောက်အောင်ပို့ပြီးမှ နှလုံးသားထဲကနေ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ထုတ်လုပ်
ဖို့အတွက် သဒ္ဓါတရားက တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်။
မေတ္တာတရားမရှိရင် မိတ်ဆွေ ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ အတုအယောက်မျှသာပါပဲ။တကယ့်အနွတ္တနာမည်
မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်မေတ္တာရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင် မိတ်ဆွေ လို့ ခေါ်ပါတယ်။
(အရှင် ဆန္ဒာ ဓိက)
ရှေးအခါက ကလိင်္ဂမင်းနဲ့ အသကမင်းတို့စစ်ခင်းဖို့ပြင် ဆင်ကြတော့ သိကြားမင်းက “အရှင် ကာလိင်္ဂ
မင်း နိုင်လိမ့်မယ်” လို့ နိမိတ်ကောက် ဟောလိုက်တယ်။
ဒါကြောင့် ပြောတိုင်းဟောတိုင်းလည်း မယုံပါနှင့်။ ဘယ်နေရာမဆို ဥာဏ်၊လုံပလ၊သတ္တိသာပဓာနပါ။
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖို့သာ အဓိက ပါ။
တကယ်အရှိဖြစ်တဲ့ စေတနာရဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိ၊ဥာဏ်ရဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိ၊၀ိရီယရဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိ ဒါတွေ
အားလုံး ကိုယ်မှာ အရှိဖြစ်တဲ့ ဒီသဘာဝတရားတွေပါပဲ။အဲဒီ စွမ်းရည်သတ္တိတွေကို မယုံကြည်အားမ
ကိုးတာ အဲဒါကို “နိယက မိစ္ဆာဒိဌိ” လို့ခေါ်ပါတယ်။
လူတော် လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အရေးကောင်းကောင်းနေတတ်ဖို့၊ကောင်းကောင်း ပြောဆိုဆက်
ဆံတတ်ဖို့၊မိဘဆရာသမား လူကြီးသူမရဲ့ ဆိုဆုံးမတာကို ကောင်းကောင်းနားထောင်တတ်ဖို့ အရေး
“အချို့ သော သူတို့ကား ဒါနကုသိုလ် မဂ်ဖိုလ်သို့ မဆောင်းနိုင် သံသရာရှည်ဖို့သာဖြစ်၏” ဟုဆိုကြ
တယ်။“ဒါနဆိုတာ စေတနာ ပါပဲ” စေတနာ တရားဟာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးမှာ တစုံတခုသော မဂ္ဂင်တါင် မပါပါ
မဂ်မျိုး၊ဖိုလ်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး ဟု ဆိုကြတယ်။
မိုက်လေစွ။မှားလေစွ။ဒါနစေတနာမှာ နိဗ္ဗိဒါဥာဏ် ကိုဖြည့်စွမ်းပေးတယ်။ အဲဒီ ဥာဏ်ဟာ သမ္မာဒိဌိဆို
တဲ့ ဦးတည်ရာ မဂ္ဂင်ကြီးပဲ မဟုတ်လား။
စေတနာ နဲ့ ယှဉ်သော သင်္ကပ္ပတရား၊၀ီရိယတရား၊သတိတရား၊ သမာဓိတရားများဟာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးမှာ
သမ္မာဝါယမ၊သမ္မာ သင်္ကပ္ပ၊သမ္မာသတိ၊သမ္မာသမာဓိ ပါပဲ။
“ကမ္မကဋိသရဏ” တဲ့ ခန္ဓာပွားရှိထားတဲ့ ဥစ္စာဟာ အားကိုးစရာ အစစ်အမှန် မဟုတ်ပါဘူး။အားကိုးစ
ရာ အစစ်အမှန်က ကံတရား ပါပဲ။
“ဇာဂရိတေ သမ္ပဇန ကာရီ ဟောတိ” တဲ့
နိုးနိုးခြင်း သတိလေးနဲ့ ကပ်ပြီး နေလိုက်ပါတဲ့။အဲဒီအခါ ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာ၊ရုပ်မှာဖြစ်နေမယ်၊ဝေဒနာ
မှာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ်။စိတ်ထဲက တခုခုကို တွေးမိရင်လည်းပဲ အဲဒီတွေးတာကိုပဲ သိလိုက်ပါတဲ့။
(အဲဒီလို သိနေတာကိုက တမျိုးစိတ်ထဲ ငြိမ်းချမ်းနေတယ်နော်)
Posted by သဇင်ရနံ့at 16:10 No comments:
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ အောင်မြင်ကြီးပွားကြောင်း သြ၀ါဒ ရတနာများ-၂
သီလ စက်ကြယ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါဆိုတာ မရှိပါဘူး။ရုပ်နမ်နှစ်ပါး ပဲရှိတယ်...လို့အကြောင်းအားလျှော်
စွာ နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်နားလည်မိခဲ့ရင် စူဠသောတာပန် ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ စိတ်သန့်စင် စက်ထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါအုံး။ ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ စိတ်ကောင်ုးတ်လုပ်တဲ့
စက်ကြီးထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါအုံး။ ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ စိတ်အပူအအေးခံတဲ့ စက်ကြီးထဲမှာ စိတ်
ကိုထည့်ပေးပါအုံး။ကိုယ်မစွမ်းဆောင်နိုင်ရင် ဘုရားဆီက အကူအညီယူရတယ်။
လုံ့လနှစ်မျိုါ်ရှိပါတယ်။ကာယိက၀ီရိယဆိုတဲ့ ကိုယ်၌ဖြစ်သောလုံ့လ၀ီရိယနဲ့ စေတသိက၀ီရိယဆိုတဲ့
စိတ်၌ဖြစ်သော လုံ့လ၀ီရိယပါပဲ။လုံ့လ၀ီရိယ နှစ်မျိုး စလုံးက လူရဲ့ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအား တွေပါ။
ယခုခေတ်က ကိုယ်ရပ်နေတဲ့နေရာဟာမခိုင်မာဘူး။ပျော့နေတယ်နော်။ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်အခုလုပ်ကိုင်
နေတဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ၊ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေ၊ဒါတွေဟာအမြဲတမ်းဒီလိုပဲ နေသွားရမယ်
လို့ဘယ်လိုမှ စိတ်ချလို့ မရတော့ဘူး။အမြဲတမ်း လှုပ်ရှားနေတယ်။ပြောင်းလဲနေတယ်။ပျော့နေတယ်။
ဗြဟ္မစိုရ်တရား တွေထွန်းကားလာလို့စိတ်မှာလဲကောင်းစိတ် ချဉ်းဖြစ်မယ်။နှုတ်ထွက်ကလဲ ကောင်း
နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြူသထက်ဖြူဖို့ လမ်းကောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပဲ မှတ်ကြပေရော့။
ဧဟိပသိကော ကို မယုံလျှင် ကျင့်ကြည့်ကြံကြည့်။
ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ချစ်ကြ
ခန္ဓာကိုယ်ချစ်လျှင် သံသရာတွင် နစ်မည်။
လူသွားတဲ့နောက် အရိပ်ကပ်လိုက်လာသလို သံသရာခရီး တလျှောက် တို့တတွေ နောက်မှာ မမြင်နိုင်
တဲ့ ကံတရား ကပ်လိုက်ပါလာတယ် ဆိုတာ သတိပြုရမယ်။
ယုံကြည်ကိုးစားအလေးအမြတ်ထားသော ဘာသာတရား၏ ပေးထားသောလုပ်ခ၊မိမိရပိုင်ခွင့် အကျိုး
ဖလစွမ်းအင်နှင့် ရရှိခံစားမှု၊သုခမျိုးကိုသာ လိမ္မာပါးနပ် ဥာဏ်ပညာဖြင့် တည့်မတ်မှန်ကန်စွာစစ်ဆေး
ဝေဖန်တတ်သူအဖြစ် အဟုတ်တကယ် ဖြစ်ရှိထားရမည်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 19:02 No comments:
on the top of the world ဆိုတာ happy လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမာ ကျေနပ်နေတာကိုလဲ
It'sabeautiful day,and I feel on top of the world!
over the moon ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို very pleased about somethingလို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့စကားစုဖြစ်ပါ
He's just had some good news.He's got the job that he wanted ,and he's over the
moon about it.
on cloud nine ဆိုတာကလဲvery happy because of somethingဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဆိုင်တဲ့စကားစု
Getting my first job as an actor was so exciting.I was on cloud nine for weeks afterwards.
Posted by သဇင်ရနံ့at 18:31 No comments:
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ အောင်မြင်ကြီးပွားကြောင်း သြ၀ါဒ ရတနာများ-၁
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာ နာတိကရွာ အုတ်တိုက်ကျောင်း တွင် သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတပည့်
တွေကို သံသရာထဲမှာ ထပ်ခါ မသေချင်ပါဘူး၊နိဗ္ဗါန်ကိုေ၇ာက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် သေခြင်းတရားကိုနှ
လုံးသွင်း လို့ ဟောတော်မူပါတယ်။
ရှေးကံက ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲဆိုယင် တရားရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံကို ပို့လိုက်တာပဲ။ရှေးကံကို
သူများစိတ်ကို ကိုယ်စစ်စစ်၊ကိုယ့်စိတ်ကိုပဲ သူများစစ်စစ်၊ကိုယ့်စိတ်ကောင်းဖို့အတွက် ကိုယ့်စိတ်အ
ဆင့်အတန်းမြင့်မားဖို့အတွက်၊ကိုယ့်စိတ်အရည်အသွေး ပြည့်ဝဖို့ အတွက်ကိုသာ ဦးတည်ချက်ထား
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဥာဏ်နဲ့စဉ်းစားပေါ့၊ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ အငှားသာဖြစ်တယ်။အငှားရဲ့သဘောဟာ
အချိန်စေ့တော့ ပြန်အပ်ရမှာ။နောက်က အချိ်န်ကန့်သတ်ချက်လေးတွပါတယ်။
မည်သည့်အတတ်မဆို စိတ်ထားကောင်းမှု၊မကောင်းမှု ပေါ် မူတည်ပါတယ်။စိတ်ထားကောင်းသူရဲ့
အတတ်ပညာကား မိမိ၊သူတပါး နှစ်ဦးစလုံး အကျိုးရှိစေ၍ စိတ်ထားမကောင်းသူရဲ့ အတတ်ပညာမှာ
သူများအထင်ကြီးရုံကလေးတော့ မလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့။ကိုယ့်စိတ်က ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ် အမြဲရှိ
နေရမယ်။ကိုယ်က ရိုးသားမှ အများကလည်း ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီး ရိုးသားတယ်လို့ယုံကြည်လာကြမှာ။သူ
တော်ကောင်းတရားတွေ ကိုယ့်မှာ ပြည့်စုံလာရင် ကောင်းတဲ့နေရာကို ရောက်လာအမှန်ပဲ။
တင်မော်(ဓာတု)၏ မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ အောင်မြင်ကြီးပွားကြောင်း သြ၀ါဒ ရတနာများစာအုပ်မှကူးယူ
Posted by သဇင်ရနံ့at 20:58 No comments:
In stitches ဆိုတာက အင်္ဂလိပ်လို laughingalot လို့တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။ဟာသတခုခုကို
Somebody toldavery funny joke at the office yesterday,and we were all in stitches for five
မနေ့က ရုံးမာ တော်တော်ရယ်ရတဲ့ဟာသတွေကြားရတော့ ကျနော်တို့အားလုံး ငါးမိနစ်လောက်ဆက်
keepastraight ဆိုတာက အင်္ဂလိပ်လို not smile or laugh ဖြစ်ပါတယ်။ ရယ်ချင်ရက်နင့်မရယ်မိ
The boss was inabad mood and started to talk aboutawork problem.I couldn't forget the
joke and I couldn't keepastraight face.
burst out laughing ဆိုတာကတော့ suddenly laugh loudly ဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်တဟားဟားနင့်
The boss asked me what I was smiling at.When I told him,he just looked at me and said
nothing.I thought he was going to throw me out.But then he burst out laughing!
သဌေးက ကျနော့ကိုဘာပြုံးတာလဲလို့မေးတယ်။ကျနော်က ကျနော်တို့ပြောနေကြတဲ့ဟာသကိုပြောပြ
တော့ သူကျနော့ကိုဘာမှမပြောပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်။ကျနော်ထင်တာ သူကျနော့ကိုများကိုင်ပေါက်
လိုက်တော့မလားပေါ့။ဒါပေမယ့် သူ ရုတ်တရက် တဟားဟားနင့်ထရယ်ပါရော။
ရွှင်ပြုံးပျော်လို့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြတာပေါ့။
Posted by သဇင်ရနံ့at 15:24 No comments:
လူတိုင်း၊လူတိုင်း နေ့စဉ်ကော်ဖီ ၅၀၀ မီလီဂရမ်ကိုပုံမှန်သောက်သုံးသင့်ကြသည်။ သို့ရာတွင်သွေးတိုး
ရောဂါဝေဒနာရှင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများမှာကော်ဖီကိုအကန့် အသတ်ဖြင့်သာ သောက်သုံး
သင့်ကြသည်ဟု ဆေးသုတေသနပညာရှင်များ ကအကြံပြုထားသည်။
အမေရိကန်ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များက လူတိုင်းသည်နေ့ စဉ်ကော်ဖီငါးခွက်ကိုပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်
အယ်လ်ဇိုင်းမား (Alzheimer) ခေါ်အတိတ်မေ့ရောဂါကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေပြီး မှတ်ဥာဏ်စွမ်း
ရည်များပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည် ကိုလေ့လာတွေ့ ရှိခဲ့ကြသည်။ဗြိတိသျှဆေးပညာရှင်များက
ဇိုင်းမားရောဂါဆိုင်ရာသူတေသနဌာနအကြီးအကဲရီဘက်ကာဝုဒ်က ကော်ဖီကို အလ်လ်ဇိုင်းမားရော
ဂါဝေဒနာရှင်များသာမကမှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးလာစေရန် လူတစ်ဦးလျှင်နေ့စဉ်ပုံမှန် အနည်း
ဆုံးကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုမဖြစ်မနေ သောက်သုံးသင့်သည်ဟု အကြံပြုတင်ထားသည်။
ပြင်သစ်ဆေးသုတေသီများသည်ကော်ဖီသောက်သုံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုတေသနပြုခဲ့ကြရာကော်ဖီ ပုံ
မှန်သောက်သုံးကြသည့် အမျိုးသမီးများမှာ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာကြောင်းလေ့လာ
တွေ့ ရှိခဲ့ကြသည်။ပြင်သစ်ဆေးသုတေသနပညာရှင်များသည် အသက်(၆၅)နှစ်နှင့်အထက်အမျိုးသမီး
များကိုတစ်နေ့ လျှင်ကော်ဖီတစ်ခွက် နှုန်းသောက်သုံးစေခဲ့ရာမှ သုံးခွက်နှုန်းတိုးမြှင့်သောက်သုံးစေခဲ့
ရာ၎င်းတို့မှာယခင်ကထက် မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ပိုမိုတိုးတက်လာကြသည်ကိုလက်တွေ့ စမ်းသပ်တွေ့
ရှိခဲ့ရ သည်။ကော်ဖီသောက်သုံးရာတွင် ကော်ဖီစေ့မှကြိတ်၍ရရှိသောကော်ဖီမှုန့် ကိုကျို၍သောက်
Posted by သဇင်ရနံ့at 20:54 No comments:
Really Usefull English Idioms 1 ကနေ4အထိက People ဆိုရေခေါင်းစဉ်အောက်မာ ရှိပါတယ်။
အခု Really Usefull English Idioms5ကစပြီးတော့Emotions ခေါင်စဉ်အောက်ကနေဆက်လို့တင်
ဒီနေ့တင်ပြမယ့်ခေါင်းစဉ်က All kinds ဖြစ်ပါတယ်။
Leave me cold ဆိုတာက တခုခုအပေါ်မာသိပ်ထူးထူးခြားခြားအဓိပ္ပါယ်မသက်ရောက်ဖူး။ထိ
ရောက်မှုမရှိဘူးလို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။has no effect om me လို့အင်္ဂလိပ်လိုတိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်
Charles က သူ့ကောင်မလေးအဆောင်ရှေ့ မာသွားပြီးခေတ်ဟောင်းသီချင်းသွားဆိုပြတော့ သူ့
I'm sorry, Charles,but classical music just leaves me cold.
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ချားစ်ရယ်။ဒါပေမယ့်ဒီလိုခေတ်ဟောင်းတေးတွေကငါ့အပေါ်
နောက်စကားလုံးတလုံးကတော့ on edge ဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပါယ်ကတော့စိုးရိမ်ပူပန်တယ်။စိတ်သော
က ဖြစ်တယ် စသည်ဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဆိုပါစို့ဥပမာ လူအများရှေ့ စကားပြောဖို့စိုးရိမ်တာမျိုး၊တခုခုကိုအ၇မ်းသောကဖြစ်နေတာမျိုးတွေပေါ့။
I'm on edge.I was bored to death.I was worried to death. I was scared to death.
(-ed)to death ကိုအင်္ဂလိပ်လို extremely လို့တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရပါတယ်။
ပြောရကေ အတိတ်ကိုကျနော်ကောင်းမပြောချင်။ရွှေထီးဆောင်းခစောဝ်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ပြိုလဲခ စောဝ် ပဲဖြစ်
ဖြစ်ပြီးသားတိကတခုလဲလုပ် လို့မရယာ။ပြန်တမ်းတနိမ်လို့လဲအပိုယာ။၀မ်းနည်းပူဆွေးနိမ်လို့ လဲအချဉ်း
နှီးယာ။ယကေလဲတချို့ အတိတ်တိကဂနိမျိုးဆက်တိအတွက်အတုယူစရာ၊ သင်ခန်းစာယူစရာတိပါကေ
ပင်ရေးရေး၊ပြိုလဲခရေကာလ ကို ပင်ပြောပြော ပြောရေစေတနာတိ ကျနော်ရို့ လူမျိုး တိ အ တွက်တစုံ
တရာ သတိသံဝေဂယူစရာ၊ဆင် ခြင်းစရာတိဖြစ်အောင်၊အတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးကို ပစ္စုပ္ပန်ကိုအ
ကောင်းဆုံးတည် ဆောက်ပနာ၊ အနာဂတ်အတွက်အဆင့်အမြင့်ဆုံးပြင်ဆင်လို့ ရ အောင်စေတနာနင့်
သမိုင်းကိုသင်ခြင်းသည် မျိုးဆက်သစ်တိမ(အ)အောင်လို့ သင်ရရေလို့ကြားဖူးပါသည်။ယေ့အတွက်
ကျနော်ရို့ရခိုင်လူမျိုးတိ၊ မျိုးဆက်သစ်တိမ(အ)အောင်လုပ်ရဖို့က ကျနော်ရို့တာဝန်ပါ။ဒေ နိမ်ရာမာအ
ရာဇာကြီးက ဗမာပြည်ကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဖူးရေ။ယေ့ပိုင်ဝင်တိုက်ပြီးကေနန်းကိုပါပြာ ပုံဘ၀
ရောက်အောင်မီးလောက်တိုက်သွင်းခပြီးရေအတွက် ဗမာပြည်လဲ တစစဖြစ်လားခလီရေ။နန္ဒဘုရင်
လက် ထက်မာပြန်နလန်မထူခနိုင်ရေအပြင်သူ့သားတော် အနောက်ဘက်လွန်မင်း လက် ထက်ထိ
နင့်တိုက်ဖို့ကလေ့စားချေဖို့က ဗမာဘုရင်အဆက်ဆက်ရို့ ၏အဓိကဦးစားပီးဖြစ်လာ ရေ။
သူရို့ ဆင်ဖြူတော်ကိုပြန်ရဖို့အတွက်အထူးကြိုးစားခရေစောဝ်ကိုတွိရရေ။ အနောက်ဘက်လွန်မင်းက
ယေ့ခါကဂိုအာဘုရင်ကိုမြောက်ဦးကိုပူးပေါင်းဝင်တိုက်ဖို့အတွက် သံတမန်တိစေလွှတ်လို့မိန်း ဖူးရေ။
ဗမာဘုရင်ကဇာပိုင်ကမ်းလှမ်းလဲဆိုကေ သူရို့ ပူးပေါင်းတိုက်လို့ရခိုင်ကိုနိုင်ကေသူရို့ပိုင် ဆင်ဖြူ တော်
သို့ သော် ဂိုအာဘုရင်ကတခုလဲအကြောင်းမပြန်။မပြန်ရခြင်းက ရခိုင်ကိုဝင်တိုက်ခြင်းက ကိုယ့်သီ
တွင်းကိုကိုယ်တူးစောဝ်နင့် အတူတူဆိုစောဝ်ကိုယေ့ခါကဂိုအာ ဘုရင်ကကောင်းကောင်းသဘော
ပေါက်တေ။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ရီတပ်ကိုသူရို့ အကြောက်ဆုံး။ သူရို့ တောင်ဇာ နိမ့်ဝင် တိုက်ခံရဖို့လဲလို့
ကြောက်နိမ်ရလို့ ရခိုင်ကိုမျက်နှာချိုသွီးနိမ်ရရေအချိန်မာ အဂုပိုင်လားလို့ရန်စကေ မျိုးပြုတ်လားဖို့ဆို
ဒေနိမ်ရာမာ ရခိုင်ရှင်ဘုရင်က ဇာအတွက် ဗမာပြည်ကိုလားတိုက်ရလဲဆိုစောဝ်သိဖို့လိုလာရေ။
လဲဟိဖို့ ဆိုကေ ဒေဘုရင်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးရို့ ၏အဓိပတိဖြစ်လားဖို့လို့ရခိုင်ရှင်ဘုရင်
ကယူ ဆ ထားရေ။ယေ့အတွက် ဆင်ဖြူတော်ကိုလိုချင်ရေ။ဆင်ဖြူတော်ဇာမာဟိလဲလို့ကြည့်လိုက်
တေခါဗမာ ဘုရင်မာဟိစောဝ်လားတွိရရေ။ ဗမာတိကလဲ သူရို့ ကိုယ်သူရို့ ဆင်ဖြူရှင်ဆိုပြီးသွီးနထင်
ကိုရောက် နိမ်စောဝ်ရခိုင်ဘုရင်ကြည့်လို့မရစောဝ်လဲပါ ပါလိမ့်မေ။သို့ သော် ဗမာပြည်ကိုလားတိုက်
ရခြင်းကယေ့ အ တွက်သက် သက် တော့မဟုတ်။အခြား ဖြစ်နိုင် လောက် တေအ ကြောင်း ရာ တိ
လည်း တွိရ သိမ်းရေ။
တိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတိကိုအားလုံးခြုံနိုင်အောင်လို့ ရခိုင်ပြည်ကိုဗမာပြည်က လာ တိုက်တေ
ခရဇ်သက္ကရဇ် အေဒီ ၁၀၅၀ မာ ဗမာဘုရင် အနော်ရထာ(အနိရုဒ်ဒါ)လက်ထက်မာသူ၏ လက်
အောက်ခံပြည်နယ်တခုအဖြစ်ရခိုင်ပြည်သိမ်းသွင်း လိုရေအတွက်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကို ကျူး
ကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်၏။ယပိုင်တိုက်ရာမာဗမာတိက တချက်ခုတ်နှစ် ချက်ပြတ်အစီအစိုင်
သို့ သော်ရခိုင်ရို့ ၏တိုက်ခိုက်ရည်ကို မခံနိုင်ရေအတွက်နောက်ပြန်ဆုတ်လားရရေ။သူရို့ ဆန္ဒ
၁၀၄၄ ခုနှစ်မာနန်းတက်တေအနော်ရထာမင်းစောဝ် ရခိုင်ကိုတိုက်ပြီးနောက်ခုနှစ်-နှစ်အကြာ
အေဒီ ၁၀၅၇-ခုနှစ် မာမွန်ကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးကေ ပိဋကတ်သုံးပုံကိုပင့်ဆောင်နိုင်ခကတ်လီရေ။
ရခိုင်ဘုရင်မင်းဘလူး ကသူ့အမတ်ကြီးအသင်္ခယာ၏လုပ်ကြံခြင်းကို အေဒီ ၁၀၆၈ မာလုပ်ကြံခံ ရ ပြီး
နောက်မာ သူ့သားသေ မင်းရဲဘယစောဝ် ပုဂံဘုရင်ကျန်စစ်သားပါးမာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံ ခရ ရေ။သူ့ထီး
ရခိုင်အိမ်ဟိမင်းသားကိုအကူအညီ မပီးနိုင်ခ။ယေ့ အချိန်မာ ရခိုင်အိမ်ဟိမင်းသား မာလဲအကူ အညီ
ကိုစောင့်ယင်းနင့် ပုဂံမာပဲသားတော်လင်္ကျာမင်းနန်ကိုမွိန်းခရေ။ လင်္ကျာမင်းနန်စောဝ် အ လောင်း
စည်သူမင်း၏ အကူအညီနင့်ရခိုင်ပြည် ထီးနန်းကိုပြန်လို့သိမ်းယူနိုင်ခ၏။
ရခိုင်ဘုရင်မင်းဘာကြီးက ဘင်္ဂါ ၁၂မြို့ ကိုသိမ်းပိုက်အောင်မြင်ပြီးချိန် အေဒီ ၁၅၃၂-ခုနှစ်မာ ဗမာ
ပြည်မာလဲ ဗမာဘုရင် တပင်ရွှေထီးက သူရို့ ၏ဒုတိယ ဗမာအင်ပါယာကိုပြန်လည် တည် ထောင်
နိမ်ရေ ကာလနင့်တိုက်ဆိုင်နိမ်ရေ။ဗမာဘုရင်တပင် ရွှေထီးကသူ့ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ထင်နော်ရထာ
ချမ်းရေးစာ ချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခပြီးဗမာစစ်တပ်တိနောက်ပြန်ဆုတ် လားရေ။ယေ့ရက်ကိုရခိုင်လူမျိုး
ရွှေ ထီးက ကြည်းတပ်၊ရီတပ်အလုံး အရင်း နင့်ရခိုင်ပြည်ကိုစစ်ချီလာခ၏။ယေ့အချိန်က ဗမာတိအ
နိမ်နင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ ကို တိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ထားရေအတွက်အင်မတန်သွီးနထင် ကိုရောက်
နိမ်ရေ အချိန်။ရခိုင်ကိုပစောင်နည်းနင့်မဆို အလွယ်တကူသိမ်းနိုင်လိမ့်မေလို့ယုံကြည်ထား ကတ်ပုံ
ကျရေ။သို့သော်လည်းသူရို့ မှန်းချက်နင့်နှမ်းထွက်မကိုက်ခကတ်ပါ။ ရခိုင်တိ၏ စစ်မျက်နှာတိုင်း မာ
ရွတ်ရွတ် ချွန် ချွန်ခုခံကာကွယ်ပြီးရန်သူ တပ်တိကို တွန်းလှန်ပလိုက်နိုင်ရေ ။ယေပြီးကေဗမာဘုရင်
ကိုပါ စစ်ပြေငြိမ်း ရေးစာချုပ်မာလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းနိုင်လိုက်တေ။ ဘုရင့်နောင်ရို့ ၊တပင်ရွှေထီးရို့ 
ဆိုစောဝ်ဒေနိ စစ် အစိုးရအဆက်ဆက်အင်မတန်အတုယူအားကျပြီးကေ မြို့ တော်အသစ်ကြပ်ပြီး
မာတောင် အရုတ် တိ ထုလို့အထွတ်အမြတ် ထားခံရရေဗမာစစ်ဘုရင်တိဖြစ်ကတ်တေ။
ရခိုင်ဘုရင်မဟာသမ္မတရာဇာမင်းလက်ထက် ရခိုင်ပြည်၏နန်းတွင်းမငြိမ်သက်မှု၊ပြည်သူတိ၏ ဆူပူ
မှု တိ ကို အခွင့်ကောင်ယူပနာ ဗမာ ဘုရင်ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းရေ ၁၇၈၄-ခုနှစ်မာသားသေအိမ်ဟိ
မင်းသားကိုရခိုင်ပြည်ကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ပြီး မဟာမုနိရုပ် ရှင်တော်မြတ် ကိုပါတပါတည်းပင့်လာ
ဖို့အမိန့်ထုတ် လိုက်တေ။ဒေတခါ ဗမာတိအတွက်အနှစ်နှစ်အလလက အောင့်အည်းထားစောဝ်တိ
ကိုစု ပုံပြီးကလေ့ စားချေခွင့်ရလိုက်တေလို့ပြောလို့ရရေ။ ရခိုင်နန်းတော်ကိုပြာပုံ ဘ၀ရောက်အောင်
လုပ်လားနိုင်ခရေ။အင်္ဂလိပ် တိဗမာပြည် ကို သိမ်းခါကနန်း ကိုမိန်းမတိုက်ခစောဝ်နင့်တိုင်းကြည့်လို့
ရရေ။ ရခိုင်ဘုရင်နှင့်မိဘုရားအပါအ၀င်တော်ဝင်မိသား စုအားလုံး ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လားခြင်း
ကိုခံလိုက်ရရေ။တချို့ ရခိုင်မင်းသမိန်းတိစောဝ် ဗမာတိစော်ကားအနိုင်ကျင့်ဖို့ကိုမခံချင်လို့ကိုယ့်ကို
ကိုယ်သတ် သီလားကတ်တေလို့လေ့ လာ ဖူးပါရေ။ ဗမာဘုရင်ကိုအင်္ဂလိပ်တိဖမ်းယူလားပြီးကေ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမာ အဆောင်အယောင်မင်းခမ်းမင်း နားတိ နင့်ထားစောဝ် နင့်နှိုင်းကြည့် လို့ရရေ။
ရဖို့ဖြစ်ပြီးကေရခိုင်ဘုရင်မင်းရာဇာကြီး က ဗမာပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခြင်းသည်ဆင်ဖြူတော်
နောက်တခုပြောလိုသည်မှာ သမိုင်းကိုသင်ယူခြင်းသည် အထက်ကပြောကပိုင်မ(အ),အောင်လို့ ၊လို့
ဆို ရေ စကားပါ။ဗမာတိတဖက်က မဟာမြတ်မုနိဘုရားကိုလိုချင်လို့ ကျားချောင်းပချောင်ချောင်းနိမ်
ရေ။တဖက်က ရခိုင်တိကိုနည်းမျိုးစုံနင့်ကလေ့စားချေရဖို့အတွက် ဆင်ကြံ ကြံနိမ်ရေအချိန်မာ
ရခိုင်လူမျိုး တိက ယေ့အချက်သမိုင်းထဲကသင်္ခန်းစာယူလို့အမြဲတမ်း သတိအနိမ်အထားနင့်ဟိနိမ်ရ
ဖို့အစား၊ကိုယ့်ပြသနာကို ကိုယ့်ပြည်တွင်းမာကိုယ့်အချင်းချင်း သဘောထားကြီးကြီးနင့်ဖြေရှင်းဖို့အ
စား(အ)ပြီးကေ ဗမာတိ ကို လားခေါ်ခီရေ။ တနည်းအာဖြင့်(အ) လို့ခံရရေလို့ရင်နာနာ နင့်ပြောရလီ
ဖို့ ယာ ထင်ပါယင့်။
ကျနော့အနိမ်နင့်ဒေဆောင်းပါမာ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်တ်ိကိုဖေါ်ပြရခြင်းသည် ဗမာကိုလူမျိုး ရေး အရ
မုန်းလို့၊ သူများကိုမုန်းအောင် လို့ဖန် တီးစောဝ်မျိုးမဟုတ်ပါ။ဇာလူမျိုး ဇာဘာသာ ကိုမှ ရခိုင်တိ အ
နိမ်နင့်မုန်းနိမ်စရာမလိုပါ။သို့သော်သမိုင်းထဲက သင်္ခန်းစာတိကိုယူပြီးကေ ကိုယ့်တိုင်းပြည် အတွက်၊
ကယူသင့်ရေသင်္ခန်းစာတိကိုယူပြီးကေ အဂုချိန်မာ ပြင်ဆင်ဖို့အခါကောင်းဖြစ်တေဆို စောဝ်ကိုရခိုင်
ပြည်သူတိနား လည်သ ဘောေ ပါက်ဖို့ လိုပါရေ။
တချို့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကိုသေချာနားမလည်ကတ်တေ၊လေ့လာခွင့်မရကတ်တေ ရခိုင်မျိုးဆက်လူ
ငယ်တိက ကျူးကျော်သူဗမာတိ၏ တိုင်းရင်းသားညီအကိုတိဆိုစကားနောက်မာယောင်ဝါးပြီးပါနိမ်
ကတ်စောဝ်တိကိုလည်းယေ့လူငယ်တိအိမ်မက်ထဲကလန့်နိုးကတ် လီအောင်သတိပီးချင်စောဝ်လဲပါ ပါ
ရခိုင်ရို့ ၏အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန် နှင့်အနာဂတ်(၂)ကိုဆက်လက်ဖေါ်ပြပါအုံးမည်။
Maha Muni Image and its Rough Path by U Khin Maung Saw,Berlin
The Land of The Great Image by Maurice Collis
Posted by သဇင်ရနံ့at 22:36 No comments:
For more than 2,500 years,the religion we know today as Buddhism has been the primary
inspirationbehind many successful civilizations,asource of great cultural achievements
andaprofound guide tothe very purpose of life for millions of people. Today, large
numbers of men and women fromdiverse backgrounds throughout the world are following
the teachings of the Buddha.So who was theBuddha and what are his teachings?
The man who was to become the Buddha was born Siddhattha Gotama around 2,600 years
ago asa prince ofasmall territory near what is now the Indian-Nepalese border. Though he
wasraised insplendid comfort, enjoying aristocratic status, no amount of material wealth and
sensual pleasurecould conceal life's imperfections from the unusually inquisitive young man.
So at the age of 29 heleft wealth and family behind for the remote forests and mountains of
Northeast India to search foralasting answer to life's problems He studied under the
wisest religous teachers and philosophers of his time, learning all they had to impart,but
they could not provide the answers he was seeking. Hethen struggledon the path of
self-mortification,taking that practice to the extremes of asceticism,butstill tono avail.
By the age of 35 he realized that neither self-indulgence nor self-mortification were leading
him tothe answers that he was looking for.Then,on the full moon night of May,having turned
away fromthese two extreames, he sat beneath the branches of what is now known as
the Bodhi Tree in asecluded grove by the banks ofariver,and developed his mind in
deep, luminous and tranquil states of meditation.With the extraordinary clarity and
sharp penetrative power that is generated by inner stillness,he focused his attention on
investigating the nature of existence, its cause and itscessation.Through this contemplation
of the essence of reality, he attained the supreme awakening,
the experience of enlightenment. From that point on he was known as the Buddha, the
His enlightenment consisted of the most profound and all-embracing insight into the nature of the
body, mind and all phenomena. This awakening was notarevelation fromadivine being, but a
discovery made by himself based on the deepest levels of mediation.It was an insight that liberated
his mind from the roots of all suffering: selfish desire, anger and delusion.This experience eliminated
all traces of inner conflict and discontent, revealing unshakeable peace. He had found the ultimate
solution to life's problems that he'd sought, and the result was unparalleled, sublime, true happiness.
Having realized the goal of perfect enlightenment, the Buddha spent the next 45 years teaching a
path of training and development which, when accurately and diligently followed, will lead anyone
regardless of race,class or gender to the same awakening.These teachings are called the Dhamma,
literally meaning the nature of all things or the underlying truths of existence.The following isabrief
overview of the Buddha's teachings.
The central teaching of the Buddha, around which all his other teachings revolve, is the Four Noble
1. Life involves suffering. All beings are subject to old age, sickness and death. They will inevitably
experience some disappointment, discomfort, sadness, anxiety or pain.
2. The root cause of suffering is craving for sensual pleasure, for existence,for non-existence or for
things to be different than they are. Craving is fueled by likes and dislikes, driven by the illusion of
'me' and 'mine', which in turn is due to misunderstanding the true nature of reality.
3. Suffering ends with the ending of craving. This is the attainment of enlightenment, Nibbana
(or Nirvana). Enlightenment is the complete letting go of the illusion ofapermanent and
independentself or soul. An enlightened person is called an Arahant.
4. Enlightenment is achieved throughagradual training,apath called the Middle Way, or the Noble Eightfold Path.
Buddhism isarealistic religion in that it faces up to the fact of life's many imperfections, and
optimistic in that it offersapractical solution: enlightenment in this very life.
Because all things that arise fromacause are inaconstant state of change, they are inherently
unable to provide permanent happiness or reliable satisfaction. Grasping and clinging onto any
aspect of experience leads to friction, stress or disappointment when those things, people or
situations fade and disappear. As long as suffering is seen as something unnatural or abnormal
that is to be feared, avoided or rejected, it will be impossible to uproot its causes and liveatruly
happy life. To the degree that the subtle and all-pervasive nature of suffering is recognized, one
can accept and be free from it. This is why the reflection on suffering is emphasized as the key
to ultimate liberation, and those who have realized enlightenment are inspiring examples of
profound happiness, loving-kindness and compassion.
Posted by သဇင်ရနံ့at 19:07 No comments: